ဘာကြောင့် ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်သင့်လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ၉ ချက်နှင့် သတိပြုသင့်တဲ့အချက် ၆ ချက် | Phoe Phyu & Associates
No. 131/133, 3rd Floor, Bo Ta Htaung Pogoda Road, 5th Ward, Bo Ta Htaung Township, Yangon 11162 info@uphoephyu.com
+95 (9) 960 278 100
PHOE PHYU & ASSOCIATES
For Land Disputes Group
For Land Disputes
For SMEs Group
Land Law Series
Business & Law Series
Analysis on Current Issue
Legal Solution on Land disputes
Legal Solution on free competition
Legal Solution on anti monopoly
Legal Solution on enviromental issue
Sharp & Stylic Lawyer
Law Queens & Kings
ဘာကြောင့် ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်သင့်လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ၉ ချက်နှင့် သတိပြုသင့်တဲ့အချက် ၆ ချက်
HomeBlogsPhoe Phyu's blogဘာကြောင့် ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်သင့်လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ၉ ချက်နှင့် သတိပြုသင့်တဲ့အချက် ၆ ချက်
by	Phoe Phyu
Tags: Business Issue
9 Reasons Why One Should MarryaLawyer &6Reasons to notice
ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ခြင်းက ဒီထက် ရှေ့ရေး တောက်ပလာစရာမရှိဘူးလို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်။ အမှန်က legal professional တွေက အသင့်လျော်ဆုံးသော လက်တွဲဖော်တွေဖြစ်ပြီး ငွေကြေးပိုင်း ဒါမှမဟုတ် တစ်ကိုယ်ရည် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့နေနှင့် လက်ထပ်ခြင်းက အခြားသူနဲ့ လက်ထပ်ခြင်းထက် အများကြီး မြင့်မားတဲ့ လုံခြုံမှုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါ တယ်။ လူတိုင်း ယူဆတာက ကျားမြီးသွားဆွဲမိပြီပေါ့။ တကယ်က ရှေ့နေတွေက သူတို့ရဲ့ professional ကို ကောင်းကောင်းသိတဲ့ တစ်ဖက်ကမ်းခတ်တော်တဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့က client တွေအတွက်တောင် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဝင်ကြသေးတာ သူတို့ရဲ့ ချစ်ရသူ တစ်ယောက်အတွက် မလုပ်နိုင်စရာ ဘာရှိမလဲ။ တကယ်လို့ ကွာရှင်း ဖို့ ဖြစ်လာရင် သူတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးချပြီး အခွင့်အရေး ယူလိမ့်မယ်လို့ ထင်ရင် အထင်မှားနေပါပြီ၊ နက်နဲတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုအပေါ်ကို ယုံကြည်ပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ ဘာကြောင့် ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်သင့်လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ၉ ချက်ပါ။
(1) In-house guide (အိမ်တွင်းဦးဆောင်လမ်းပြသူ)
လူတွေနဲ့ နေ့စဉ် ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ပြသာနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ ကူညီဖြေရှင်းပေးသူ ကို ရလိုက်တာပါပဲ။ ရှေ့နေတွေက မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်တတ်သူတွေမို့ မိတ်ဆွေကို အထောက်အပံ့ပေးမယ့် ဒုတိယကိုယ်ခွဲလေးပါ။ အဆုံးစွန်ဆုံးပြောရရင် စစ်ပွဲတွေကို လျှော့ချပေးသူ ဒါမှမဟုတ် ကိစ္စတွေကို အရှိန်မြင့်စေသူ ဖြစ်သောကြောင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရာမှာ တော်တဲ့၊ အပေးအယူ ညှိနှိုင်းကောင်းတဲ့သူတွေပါပဲ။
(2) They’re properly knowledgeable (ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူ)
သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကို စာဖတ်ခြင်းနှင့် လေ့လာခြင်းတွေမှာ နစ်မြုပ်ထားကြတာမို့ တတ်သိလိမ္မာ ကျွမ်းကျင်ခြင်းက အရည်အချင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ရပ်ကို ဖြစ်နေပါပြီ။
(3) They’ll make you feel comfortable (သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေနိုင်သူ)
ရှေ့နေ အများစုက ပင်ကို အားဖြင့် ရှေးဆန်ပြီး လေးနက်တဲ့ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကြောင့် သူတို့တွေရဲ့ ကောက်ကာ ငင်ကာ ပေါက်ကွဲပုံက မနက် အစောကြီး ၅ နာရီလောက်မှာ သီချင်းထဖွင့်တာလောက်ပါပဲ။ ဒါ့ထက်ဆိုးတာတွေတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
(4) They’re top notch trouble solvers (ထိပ်တန်း ပြဿနာ ဖြေရှင်းသူ)
မိတ်ဆွေကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို ပြောပြကြည့်လိုက်ပါ၊ သူတို့ရဲ့ ထိုးထွင်းဉာဏ်ယုတ္တိကို အသုံးပြုပြီး အဖြေရှာပေးပါလိမ့်မယ်။
(5) They’re beneficial (အကျိုးပြုသူ)
ရှည်လျားလှတဲ့ အချိန် ကာလ အတောအတွင်းမှာ ရှေ့နေတွေဟာ သူတို့ မိသားစုမှာ အတော်လေး အရေးပါ အသုံးဝင်သူတွေပါ။ ရှေးဆိုရိုးစကားအရ “ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုအတွက် လူတိုင်း လိုအပ်တာက ဆရာဝန် တစ်ယောက် ၊ ရှေ့နေတစ်ယောက် ၊ ရဲတစ်ယောက်နဲ့ တရားဟောဆရာတစ်ယောက်ပါတဲ့ “(မွေးခြင်း၊ သေခြင်းကို ပြောဟန်တူပါတယ်)
(6) They’ll hold you out of problem ( ပြဿနာတွေ အပြင်ဘက်မှ ကူညီဖြေရှင်းပေးသူ)
စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေမှာ အတော်လေး အတွေ့အကြုံရှိသူတွေမို့ Legal professionals တွေသာ စိတ်အား ထက်သန်မယ်ဆိုရင် ပြဿနာတွေ ပြေလည်နိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေမှာ ပြစ်မှုကြီး/ငယ်တစ်ခုရှိလာမယ်ဆိုရင် ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်သူတွေက ရှေ့နေတွေအပြင် သိပ်အများကြီး မရှိပါဘူး။
(7) They’re amazing problem solvers (အံ့သြဖွယ် အဖြေရှာနိုင်သူ)
မိတ်ဆွေကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ပေးနေတဲ့ အကြောင်းအရာကို ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို ပြောပြလိုက်ပါ။ သူတို့ရဲ့ ထိုးထွင်းဉာဏ်ယုတ္တိကို သုံးပြီး အဖြေရှာပေးပါလိမ့်မယ်။ လူဆိုတာ ပြဿနာတစ်စုံတရာဖြစ်ရင် ထူပူ ပြီး မစဉ်းစားတတ်တော့ပါဘူး။ မိတ်ဆွေနားမှာ ရှေ့နေတစ်ယောက် ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်အေးအေး၊ သွေးအေးအေး အစီအစဉ်ချ လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်က မိတ်ဆွေပြဿနာကို အံ့ဖွယ်ဖြေရှင်းပေးသူ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
(8) You’ll never be bored (ဘယ်တော့မှ ပျင်းရမှာ မဟုတ်)
Legal professionals တွေမှာ အမြဲတစ်စေ ပြောစရာ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တရားရုံးက မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေ၊ သက်သေခံချက်တွေ အများကြီး သိထားပြီးပြီမို့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာတွေ၊ ဥပဒေ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ လက်တွေ့သုတေသနလုပ်ဆောင်မှုတွေ ၊ အစွန်းကုန် စူးစမ်းဖို့ အားစိုက်စရာ မလိုအောင် စည်းမျဉ်း ဥပဒေသ စတဲ့ စွမ်းရည်တွေရှိထားပြီးသူမို့ နိုင်ငံရေးကစပြီး စာပေကဏ္ဍတွေထိ ပြောဆို ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ပျင်းချိန်တောင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(9) Freedom (လွပ်လပ်မှု)
ဘယ်ရှေ့နေမှ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ လူတိုင်းရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို သူတို့ လေးစားပါတယ်။ Date လုပ်ရာမှာတောင် ဘောင်တွေ တာဝန်ယူမှုတွေ ရှိပါတယ်လို့ လက်ခံ ထားသူတွေပါ ၊ သူတစ်ပါးသဘောဆန္ဒမပါဘဲ အိမ်ထောင်ရေးကို ဝင်ရောက် နှောင့်ယှက်မယ့်သူတွေ မဟုတ် ပါဘူး။
6 Reasons Why One Should takeanotice to MarryaLawyer
ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ဖို့ သတိပြုသင့်တဲ့အချက် (၆) ချက်
ရှေ့မှာ တင်ပြခဲ့တာတွေကတော့ ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေ မြင်ရတာကို ပြန်လည်တင်ပြတာသက်သက်ပါ။ ရှေ့နေကို ချစ်သူရည်းစားထား၊ လင်တော်၊ မယားတော်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ဆက်လက်တင်ပြပါဦးမယ်။ ကောင်းတာရော ဆိုးတာပါ ဒွန်တွဲနေတာကတော့ လောက သဘာဝတရားတွေပါပဲ။ ကိုယ်ဘယ်ဟာကို နှစ်သက်တယ်၊ မနှစ်သက်ဘူး၊ ပြုပြင်ယူမယ်၊ မယူဘူးဆိုတာတော့ ကိုယ်ပိုင် ရွေးချယ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့နေတွေရဲ့ ချစ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်တွေအပေါ် ဆိုးတဲ့အချက်တွေကတော့ ရှိစမြဲပါပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် သတိပြုရမယ့် အချက်တွေပေါ့။
ရှေ့နေတွေရဲ့ Professional အလုပ်ကိုက သူများနဲ့မတူတာက ပြိုင်ဆိုင်နေရတဲ့အလုပ် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အမှုပဲလိုက်လိုက်၊ စီးပွားရေးဥပဒေပဲ အကြံပေးပေး၊ သူတို့က ပြိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဈာန်ဝင်နေရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အားပြိုင်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်သူဟာ တစ်ခါတရံ ချစ်သူရည်းစားနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်မှာပါ အကျင့်ပါလာတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှု လွန်ကဲလွန်းတာရော၊ အနိုင်ရဖို့ ပြိုင်ဆိုင်ရတာ အကျင့်ပါနေတာကြောင့် ချစ်သူ/ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ သဘောမတူစရာလေးတွေ တွေ့ရင်တောင် ရှေ့နေရဲ့ အကျင့်အတိုင်း သူ့သဘောထားကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့ အလွန်အကဲ အားထုတ်မိတော့တာပါပဲ။ ဒီတော့ ရှေ့နေတွေဟာ အချစ်နည်းသူ၊ အကြင်နာနည်းသူ၊ မေတ္တာနည်းသူတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတော့တာပါပဲ။ ဒါ့ထက် ပိုဆိုးတာက အတ္တကြီးသူလို့ အထင်မှတ်မှားခံရတာပါပဲ။ တကယ်တော့ ဝသီကြောင့်၊ အကျင့်ကြောင့် ဖြစ်နေကြ တာပါ။ တကယ်မချစ်တတ်တာတော့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပေါ့။
(၂) ယုတ္တိဗေဒနဲ့ စူးဆန်းလွန်းခြင်း
ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် တချို့ အရေးမကြီးတာတွေမှာ မပြောတော့တာ။ မရှင်းပြတော့တာ။ မပြောသင့်လို့ ထိမ်ချန်ချင်တာ၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကွယ်ရာ လျှို့ဝှက်ချင်တာလေးတွေဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် လျှို့ဝှက်တတ်တာလေးတွေ ရှိတတ်ကြပေမယ့် ရှေ့နေကို ချစ်သူလုပ်၊ လင်တော်၊ မယားတော်ရတဲ့ သူတွေမှာတော့ အခက်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ရှေ့နေတွေဆိုတာက အသေးစိတ်လေးတွေကအစ ဂရုစိုက်လွန်းတတ်တော့ သူ့ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ် သူ့အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ စိတ်ကိုပါ သိအောင် ကြိုးစားတော့တာပါပဲ။ ဘာမှ အရေးမကြီးလို့ ရေရှည်မှာလည်း စိတ်သက်သက်သာသာ ဖြစ်စေချင်လို့၊ ဘာရယ်မဟုတ် လျှို့ဝှက်ထားမိရင်တောင် အဲ့ဒါကို ရှေ့နေတွေက ဘာလဲ စဉ်းစားတော့တာပါပဲ၊ ကောက်ချက်တွေ ချတော့တာပါပဲ။ တစ်ခါတရံ ခံစားချက်ဆိုတာ ယုတ္တိဗေဒနဲ့ ကင်းကွာနေတယ်ဆိုတာကို ရှေ့နေတွေ သတိမပြုမိတတ်ကြပါဘူး။ အလုပ်စွဲရောဂါသည် ရှေ့နေတွေဟာ သူ့ချစ်သူကိုဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့အိမ်ထောင်ဘက်ကိုဖြစ်ဖြစ် ယုတ္တိဖိဆီးမှု တွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
(၃) တရားခွင်နဲ့ အိပ်ယာမှားခြင်း၊ သက်သေနဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကိုမှားခြင်း
အမှုစစ်ရတာ သိပ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရှေ့နေတွေဟာ လူတစ်ယောက်ပြောသွားတဲ့ စကားတွေထဲမှာ ဘယ်အချက်ဟာ မမှန်တဲ့အချက် ပြောသွားတတ်တယ်ဆိုတာကို နားထောင်နေရုံနဲ့ တန်းသိတတ်ကြတာပါ။ စကားသံကြားရုံနဲ့ သိသလို၊ မျက်လုံးကို မြင်ရုံနဲ့လည်း ရှေ့နေတွေက သိတတ်ကြပါတယ်။ စကားပြောသံကို မကြားရနဲ့ဦး၊ စကားပြောသူ မျက်လုံးကို မြင်ရုံနဲ့တောင် အဲ့လူစကားပြောနေချိန် ဘယ်နှစက္ကန့်အကြာမှာ စလိမ်တယ်ဆိုတာ သိနေပါရော။ ဒီထက်ပိုမြန်ဆန်တဲ့ အခုခေတ်လို နည်းပညာခေတ်မှာ i pleader လို online အင်တာနက် ဥပဒေ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ရှေ့နေတွေ ပေါ်လာပြန်ရော။ အဲ့ရှေ့နေတွေက messenger မှာ ရေးတဲ့စာသားတွေကို မြင်ရုံနဲ့ ဘယ်နှကြောင်းမြောက်မှာ တစ်ဖက်လူ စလိမ်တယ်ဆိုတာ သိနေတတ်ပါတယ်။ ရှေ့နေတွေက စိတ်ပညာရှင်တွေလိုပါပဲ။ အဲ့လောက်ထိ လူ့စိတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီး အာရုံခံနိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ အာရုံမခံနိုင်တာကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားပါပဲ။ လိုရင်းအနှစ်သာရကိုမေ့ပြီး စကားလုံးတွေနောက် လျှောက်လိုက်တတ်ကြလို့ ရှေ့နေတွေက အချစ်ကို အာရုံမခံတတ်သူတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ရှေ့နေဆိုတာ ချစ်သူ/ အိမ်ထောင်ဘက်ကိုတောင် တရားခွင်ထဲက ဝက်ခြံနဲ့ အိပ်ယာကို မှားတတ်သလို၊ သက်သေနဲ့ ချစ်သူ/ အိမ်ထောင်ဘက်ကို မှားတတ်တယ်။ အဲ့လောက်ထိ စကားလုံးတွေကို ဆန်းစစ် စူးစမ်းနေတတ်ကြတာပါ။ တစ်ဖက်လူမှာ ဘယ်လောက်စိတ်မသက်မသာ စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်မလဲ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေစာအုပ်တိုင်းမှာ အခန်းတစ်ကို စဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ပါစမြဲပါ။ ဒီတော့ ရှေ့နေတွေက သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်ဘဝမှာ ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အမှုဖြစ်ဖြစ်၊ သတ်မှတ်ဖို့ စကားလုံးဖွင့်ဆိုချက်ကို သူတို့က အသက်ရှူသလိုကို အလိုလို စဉ်းစားပြီးသား၊ အဖြေထုတ်ပြီးသား ဖြစ်နေတတ်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ လူမှုဘဝလည်းရောက်ရော ရှေ့နေရဲ့ ချစ်သူ/ အိမ်ထောင်ဘက်က စကားတစ်ခွန်းကို ရွဲ့ပြောရင်တောင် သူတို့ရွဲ့ပြောမှန်း မသိတော့ပါဘူး။ ရှေ့နေတွေက အဲ့ဒီ့စကားလုံးတွေကို အဆုံးထိ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုတော့တာပါပဲ။ လူမှုဘဝရဲ့ ချစ်စနိုး ဘာမဟုတ်တာလေးတွေတောင် စကားလုံးဖွင့်ဆိုနည်းနဲ့ သက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာ နည်းပညာကိုသုံးပြီး လျှောက်စဉ်းစားတော့တာပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက သဘောမတူစရာရှိရင် တစ်ချက်ချင်း သူ့စိတ်နဲ့သူ တုန့်ပြန်နေတော့တာပါပဲ။ ရှေ့နေနဲ့အတူနေရတဲ့ ချစ်သူ/ အိမ်ထောင်ဘက်ဟာ ရှေ့နေနဲ့နေရတာ စိတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမဖြစ်တော့တဲ့အတွက် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်စရာပါပဲ။
(၅) နောက်ဆုံးအချက် (သို့မဟုတ်) လျှောက်လဲချက် (သို့မဟုတ်) အဆိုးဆုံးအချက်
ရှေ့နေတွေဟာ သူတို့ချစ်သူရည်းစား၊ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့တွေ့ရင် စကားလုံးဝမပြောဘဲနေရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့နေတွေက သူတို့ခံယူချက်၊ သဘောထားနဲ့ သဘောတူတုန်းပဲ “ဟဲဟဲ-ဟဲဟဲ” လုပ်နေတတ်တာပါ။ သဘောမတူတာ တစ်ခုတွေ့တာနဲ့ ချက်နဲ့၊ လက်နဲ့ အကိုးအကားနဲ့ အထောက်အထားနဲ့၊ စကားတစ်လုံးချင်း၊ တစ်ချက်ချင်း၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်း ချေပတော့တာပါပဲ။ ချေပချက်တွေဟာ ကြောင်းကျိုးပြချက် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း နားထောင်နေရတဲ့ ချစ်သူ/ရည်းစား၊ အိမ်ထောင်ဖက်တို့ အတွက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ အရေးမပါသလို၊ သူ့လောက်သိပ်မတတ်သလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးလျော့သွားသလို ဖြစ်တတ်လို့ ရှေ့နေချစ်သူ/အိမ်ထောင်ဘက်ပေါ် အချစ်တွေ လျော့သွားတတ်ပါတယ်။ စာသိပ်တတ်လွန်းသူရဲ့ ခွန်းတုန့်ပြန် ချေပချက်တွေဟာ အချစ်ကို ပျောက်ဆုံးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
(၆) နောက်ဆုံးရဲ့ နောက်ဆုံးအချက် (သို့မဟုတ်) ဖောက်ပြန်ခြင်း
သတိပြု ဆင်ခြင်စရာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့နေအားလုံးကိုလည်း မဆိုလိုသလို တထစ်ချဖြစ်မယ်လို့လည်း တပ်အပ်စွပ်စွဲနေခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ခံယူချက်နဲ့ စိတ်စေတနာ အားနည်းရင် ဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့ သတိပြုဆင်ခြင်စရာ အချက်တစ်ရပ်အနေနဲ့ တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုရင် ပြုပြင်ထိန်းကျောင်း ဖေးမပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တင်ပြအပ်ပါတယ်။
ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ လိင်ကိစ္စဖောက်ပြန်မှ ဖောက်ပြန်တယ်ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခြား အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာလည်း ဖောက်ပြန်တာမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့နေတွေ တော်တော်များများဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး လူသိများ ထင်ရှားဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလုပ်မှာလည်း ဂုဏ်သတင်းကျော်စောပြီး ပိုက်ဆံငွေကြေး ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု တစ်စုံတရာလည်း ပိုက်မိသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ရှေ့နေတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အဆုံးစွန်ဆုံးသော ဘဝရည်မှန်းချက်က စကားပြောလာပါတယ်။ ရှေ့နေ တစ်ယောက်ဖြစ်တည်ခြင်းဆိုတာကို လိုင်စင်ရခြင်း၊ ဝတ်ရုံနက်ဝတ်ခြင်း၊ ခေါင်းပေါင်းပေါင်းခြင်း၊ အရာရှိဖြစ်ခြင်း၊ ပြဿနာအမှုကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရခြင်းဆိုတဲ့ အပေါ်လောက်မှာပဲ မျှော်မှန်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ့ရှေ့နေဟာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတာ၊ ငွေကြေးချမ်းသာတာ၊ အမှုတွေနိုင်တာလောက်ပေါ်မှာပဲ သူ့ရဲ့ ရှေ့နေဖြစ်ခြင်းဟာ ဆုံးခန်းတိုင်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့နေတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအပေါ် ဘဝအမြင်ဟာ သူတစ်ပါးအပေါ် မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းစိတ်နဲ့ အကျိုးဆောင်ခြင်းလို့ မခံယူနိုင်သရွေ့ အပေါ်ယံ အောင်မြင်မှု တွေ အပေါ်မှာပဲ တစ်ချိန်လုံး သာယာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အခါမှာ ဖောက်ပြန်ခြင်း စတင်လာပါတယ်။
ဘယ်လို ဖောက်ပြန်လာတာလဲဆိုတော့ ရှေ့နေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းဟာ သူတစ်ပါးအပေါ် အကျိုးဆောင် ခြင်းဆိုတဲ့ ဖြစ်တည်မှုအနှစ်သာရကို မေ့သွားပြီဆိုရင် လူတကာ ဆရာ ဆရာခေါ်တဲ့အပေါ်မှာ သာယာမယ်၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေ လျော့ကျလာမယ်၊ စာဖတ်တာတွေ အားနည်းလာမယ်၊ စဉ်းစားတွေးခေါ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်တာတွေနဲ့ သုတေသနလုပ်တာတွေပါ အားနည်းလာမယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကိုယ့်အမှုသည်အပေါ်မှာပေးရမယ့် အထူး ကျွမ်းကျင်မှု Professional Service တွေ ပေးဖို့ ပျက်ကွက်လာမယ်။ ဒါဟာ ဖောက်ပြန်ခြင်းပါပဲ။ ရှေ့နေလုပ်ငန်းရဲ့ သဘာဝကိုက အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်သွယ် ဆက်ဆံနေရတဲ့အတွက် ကိုယ့်အမှုသည်က ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ အနိုင်လိုချင်လာတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ကိုယ်ပါ ပါဝင်ပတ်သက်လာမယ်၊ ဒါမှလည်း Professional Service စိုက်ထုတ်ရတာ သက်သာမှာကိုး။ ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ပေါ်မှာတောင် ဖောက်ပြန် တတ်တဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူ/ အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်မှာလည်း မဖောက်ပြန်နိုင်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဘယ်လိုဖောက်ပြန်လာနိုင်တာလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုတစ်ချိန်လုံးအားပေးနေတဲ့ ချစ်သူ/ အိမ်ထောင်ဘက် အပေါ် မှာ မထီမဲ့မြင် ပြုမိနိုင်တာပါပဲ။
အဆိုးတကာ့အဆိုးဆုံး ဖောက်ပြန်ခြင်းကတော့ လိင်ကိစ္စဖောက်ပြန်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာရှိ တဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ လိင်မှုအဖောက်ပြန်ဆုံး Professional တွေက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်တွေနဲ့ ရှေ့နေတွေ အများဆုံးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲ့ဒီ့ Professional သမားတွေဟာ အလုပ်မှာ စိတ်ပင်ပန်းဖိဆီးမှုဒဏ်ကို ဖြေလျှော့နိုင်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ နားနေချိန်တွေမှာ ဒီ လိင်ကိစ္စတွေဆီကို စိတ်ထက်ထက်သန်သန်နဲ့ ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရှေ့နေကို ချစ်သူထား၊ အိမ်ထောင်ဘက်လုပ်မယ့် သူတွေအနေနဲ့ ရှေ့နေတွေရဲ့ လုပ်ငန်းသဘာဝနဲ့ အဲ့ဒီရှေ့နေတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်သဘောတွေကို နားလည်ပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အလိမ္မာကြီးကြီးနဲ့ ဖေးမပြုစု ပျိုးထောင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ ပါရမီဖြည့်ဘက်ကောင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့ ထင်မိပါ ကြောင်း…။
ကဲ- ရှေ့နေတွေကို တော်တော် စိတ်ပျက်သွားပြီလား။ ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ ရှေ့နေလုပ်ငန်း Professional သမားတွေဟာ ကောင်းတာတွေရော၊ ဆိုးတာတွေပါ ရောထွေးနေတယ်ဆိုတာ ကို သတိပြုဆင်ခြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့နေစိတ်ရှိတဲ့သူတွေဟာ အကျိုးဆောင်စိတ် ပြင်းပျတဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အမှုသည်အပေါ်မှာ အကျိုးဆောင်ရုံတင်မက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ်မှာပါ အကျိုးဆောင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေကို တွေ့ရမှာပါ။ ဥပမာ- သမ္မတကြီး အင်ပရာဟင်လင်ကွန်း၊ ဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယု၊ သမ္မတကြီး အိုဘားမားတို့ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အကျိုးဆောင်စိတ်အပေါ် ဖောက်ပြန်သွားတဲ့ ရှေ့နေတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာဆိုရင် ဂဠုန်ဦးစောဟာ အောက်တန်းရှေ့နေလေးဘဝကနေ အမြင့်ဆုံး နန်းရင်းဝန်အထိ ဖြစ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး ဦးဆောင်သူအဖြစ်တောင် ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒေါ်လာ သန်းချီတန်တဲ့ Law Firm ကြီးတွေကို ပိုင်တဲ့ ရှေ့နေလုပ်ငန်းရှင် သူဌေးကြီးတွေ ရှိသလို အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုပိုင်ပါလျက်နဲ့ မတရားမှန်း သိသိကြီးနဲ့ ငွေမျက်နှာတစ်ခုတည်းပဲကြည့်ပြီး လူထောင်ချီထမင်းကျွေးနေတဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ပြန်နင်းချေသွားကြတဲ့ ရှေ့နေတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဖြစ်ရပ်မှန် ဝတ္တုဇာတ်လမ်းတွေ မှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို ရှေ့နေကို လက်ထပ်သင့်၊ မသင့်နဲ့ လက်ထပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်အချက်တွေကို အမြဲသတိပြု ဖေးမပြင်ဆင်ပေးနေရနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ရှေ့နေတွေဟာ သဘာဝအရကို အလုပ်လောဘ၊ အောင်မြင်မှုလောဘ၊ ငွေကြေးလောဘကြီးတဲ့ လောဘအိုးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာရော လောဘကြီးတဲ့ အချစ်လောဘကြီးသူတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
အဲဒိ အချစ်လောဘတွေဟာ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဒီစာရှည်ကို အဆုံးထိဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်း အပေါ် ချစ်ချင်တဲ့ အချစ်လောဘတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကောဗျာ-
အားလုံးပဲ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးတွေ တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။
စီးပွားယှဉ်ပြိုင်ခြင်းရှေ့နေဆိုတာ September 23, 2018
စီးပွားယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ? August 25, 2018
ဘာကြောင့် ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်သင့်လဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ၉ ချက်နှင့် သတိပြုသင့်တဲ့အချက် ၆ ချက် August 21, 2018
Legal Services Apply Form
Awards Apply Form
+95 (9) 254 051 719
No. 131/133, 3rdFloor,
Bo Ta Htaung Pogoda Road, 5th Ward,
Bo Ta Htaung Township,
© Copyright 2017-18 Phoe Phyu & Associates | Developed by HapEye.Com